बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि ! – Welcome
[जनदिशा डटकममा पढ्नुहाेस्]
समाजको हरेक सदस्य आफुले के गर्ने, के नगर्ने । कुनैपनि काम किन गर्ने, किन नगर्ने ? कुन तरिकाबाट गर्ने भन्ने विषयमा जानकार छ । फेरिपनि समाजले सही दिशा लिन सकिरहेको छैन । हाम्रा परम्परागत मूल्य, मान्यता, संस्कार क्रमश: भत्किँदै गइरहेका छन् । मान्छेहरु आत्मकेन्द्रित हुँदै गइरहेका छन् । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनैतिक व्यवहार र कर्ममा हरदम प्रतिस्पर्धा चलिरहेजस्तो देखिन्छ । सत्मार्गमा हिँड्न चाहने र सत्कर्ममा विश्वास गर्नेहरु नै समाजमा टिक्न गाह्रो भइरहेको छ । यो सबै किन भइरहेको छ त ? कारण उही हो, बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि यस्तै हुन्छ ।